» सर्प,सर्प दंश र सर्प संरक्षणको महत्व
सर्प,सर्प दंश र सर्प संरक्षणको महत्व
१३ चैत्र २०७५, बुधबार १६:५३
आदी कालदेखी नै मानव सभ्यतासँग सर्प जोडिएको छ । हिन्दु र बौद्ध धर्मले सर्पलाई विशेष स्थान दिएको पाईन्छ । तर आम मानिसहरुमा भने सर्प सम्बन्धी निकै कम जानकारी रहेको र सोको कारण मानिसहरुमा सर्प प्रति नकरात्मक धारण रहेको पाईन्छ ।
सर्प एक घस्रेर हिंड्ने सरीसृप प्राणी हो र विश्वभर सर्पका ३४०० भन्दा बढी प्रजाति पाईएका छन् । जस मध्ये अधिकत्तमबाट मानव जातिलाई कुनै प्रकारको खतरा छैन । नेपालमा भने लगभग ८९ प्रजातिका सर्पहरु पाईन्छन् । जस मध्ये करिब १९ थरीका मात्रै घातक विष भएका छन्। सर्पहरु मांसाहारी हुन्छन् र तिनीहरुले मध्य कुनैले (जस्तै गोमन,करेत, हरेउ) आफ्नो आहाराका लागि विषको (venom) प्रयोग गर्छन् भने कुनैले (जस्तै धामन, अजिगंर) आफ्नो आहारा थिचेर वा जकडेर वा पुरै निल्ने गर्छन्।
नेपालको एक उषण प्रदेशीय क्षेत्रमा पर्ने कृषि प्रधान देश भएकोले मानिस र सर्पहरु धेरै नजीक रहने गर्छन् । आम मानिसहरुमा भने सर्प सम्बन्धी निकै कम जानकारी रहेका र सर्प दंशको घटना धेरै हुने हुँदा मानव र सर्पबीचको द्वन्द्व यस क्षेत्रमा अति नै उच्च रहेको छ । नेपालमा सर्प दंशबाट प्रति वर्ष करीब १००० मानिसको मृत्यु हुने गर्दछ, यो अन्य कुनै मानव वन्यजन्तुबाट हुने मानवीय क्षति भन्दा कयौं गुणा धेरै रहेको छ । डर र त्रासका कारण मानिसहरु पनि सर्पहरुलाई देख्ने बितिकै मार्ने गर्दछन् । यसले मानव र सर्पबीचको द्वन्द्व कम गर्ने नभएर बरु पर्यावरणीय समस्याहरु निम्त्याउन सक्छ । आश्चर्य भने सरकारद्वारा मानव सर्प द्वन्द्व न्युनीकरणको लागि कुनै पनि ठोस नीति तथा योजना बनाईएको पाईदैन।
सर्प दंश एक प्रकारको दुर्घना हो । विश्व स्वास्थ्य संगठनले सर्प दंशलाई उपेक्षीत उषण प्रदेशीय रोगमा सूचीकृत गरेको छ । कुनै पनि सर्पले आफूलाई खतरा महशुस भई आफ्नो प्रतिरक्षाको लागि मानिसलाई टोक्ने गर्दछ र टोक्नु भन्दा पहिला संकेत पनि देखाउने गर्दछ ।
सर्प दंशको बेला केही कुराहरुमा ध्यान दिए मानिस जोखिमबाट मुक्त हुन सक्छन् ।
सर्प संरक्षणको महत्व
१. किसानको असल मित्र
खेतबारीमा सर्पले मुसा आदिलाई खाएर र साना सर्पका प्रजातिले किरालाई खाएर बाली नालीमा हुने नोक्सान कम गर्दछ ।
२. आगलागीको जोखिम कम
धेरै जसो आगलागीको घटना मुसा र छुचुन्द्रोले बिजुलीको तार काटेर हुने हुँदा सर्पले मुसा छुचुन्द्रा आदिलाई खाएर आगलागीको जोखिम कम गर्दछ ।
सर्प आहार श्रृंखलाको अभिन्न अंग हो । सर्पले कुनै जीवको सिकार गर्दछ भने कुनै जीवको आहारा पनि बन्दछ र यस प्रकार पर्यावरण सन्तुलनमा सहयोग गर्दछ ।
४. औषधी उपचार
सर्पको विष आफंैमा सर्प दंशको उपचारको लागि प्रयोग हुने एन्टी स्नेक भेनम (Anti Snake Venom) बनाउनमा प्रयोग हुन्छ । साथै यसको विष विभिन्न रोगको औषधी बनाउनमा प्रयोग गर्न सकिन्छ ।
५. धार्मीक आस्था
हिन्दु र बौद्ध धर्मले सर्पलाई विशेष स्थान दिएको पाईन्छ । सर्पलाई नागको रुपमा पनि पुजिने गर्दछ । नागको पुजा गर्दा घरमा चट्याङ्ग नपर्ने, समयमा पानी पर्ने आम मानिसमा विश्वास रहेको छ ।
वन विज्ञान अध्ययन संस्थान हेटौडामा
चौथो वर्षमा अध्ययनरत छन् ।